Ogaden News Agency (ONA) – Muslimiin Lagu Midab-Takooray Wadanka Poland.
Muslimiin Lagu Midab-Takooray Wadanka Poland.
Gabdho Muslimiin Germany ah oo ciyaal iskuul ahaa oo dalka Poland u tagay si ay u booqdaan goobtii uu ka dhacay xasuuqii Holocaust ee Yuhuuda lagu xasuuqay ayaa sheegay in dadka deegaanku ay midab takooreen intii ay safarkaas ku jireen.
Booqashadan ayaa ahayd mid waxbarasho la xidhiidhay. Gabdhahan oo ka socday iskuul ku yaalla magaalada Berlin ee caasimada dalka Germany ayaa u warramay Idaacadda Deutschlandfunk Radio iyagaoo u sheegay wixii ay lasoo kulmeen. Afar ka mid ah gabdhahaas oo xijaab qabay ayaa sheegay in tacadiyo loo gaystay.
Mid kamid ah gabdhaha ayaa sheegtay in candhuuf lagu tufay iyadoo dhex maraysa waddo ku taalla meesha lagu magacaabo Lublin kadib markii ay booliisku istaajiyeen iyagoo iska muusoonaya oo aan wax dambi ah galabsanin. Gabadh kale ayaa sheegtay in laga soo eryay dukaan ka dib markii ay ku hadashay luuqadda Persian-ka
Booliska magaalada Lublin oo war qoraal ah soo saaray Talaadadii ayaa sheegay “in wax dacwad ah aysan ka soo gaadhin dadkaas markii ay safarka ku joogeen. Waxaa kale oo ay sheegeen in booliisku uu dib u baadhay kaameerooyinka ammaanka aysanna ku arkin wax dhacdo ah oo ay ku lugleeyihiin ajaanib.